Sawir qaadis - Androidsis | Androidsis (Bogga 2)
Sida loo dalbado qaabka sawirka leh Sawirada Google adoon isticmaalin kamarada
Casharro wax ku ool ah oo fudud oo aan si dhakhso leh ugu sharraxno sida loo dalbado saameynta muuqaalka muuqaalka muuqaalka sawirrada leh sawirrada Google.
Krita waxay u timaadaa Android bedel bilaash ah Photoshop
Krita waxay u timaadaa Android bedel muhiim u ah tifaftireyaasha kale ee muuqaalka ee laga heli karo Google Play Store.
Codsiyada si loo sameeyo sawir sawir leh
Ma raadineysaa barnaamijyo lagu sameeyo sawir-gacmeed? Ha seegin xulashadan 8-da barnaamij ee ugu fiican si aad u sameysid sawir-gacmeed bilaash ah.
U turjun qoraalka sawir taleefankaaga Android
Iyada oo loo marayo aaladdayada 'Android' waxaa suurtagal ah in lagu turjumo qoraalka sawir, ama la soo dejiyo ama loo isticmaalo kamaradda wakhti kasta.
Barnaamijka taleefanka ee Microsoft wuxuu kuu ogolaanayaa hadda inaad ka xakameyso muusikadaada moobaylka kombuyutarkaaga
Sharad xiiso leh si markaa kombiyuutarkaaga leh Windows 10 taleefankaaga aad u maamuli karto muusigga ka ciyaara mobilkaaga.
Waxaan hadda ku qori karnaa sawirrada Sawirada Google
Sawirada Google ayaa hada soo kordhiyay howl cusub oo noo ogolaaneysa inaan xoqno ama ku qoro qoraalka sawirada ku keydsan Google Photos
1gallery waa barnaamij cusub oo gallery ah oo aad ku qarin karto sawirada
Haddii aad rabto in qofna uusan awoodin inuu arko sawirradaada iyo fiidiyowyadaada ugu halista badan, 1Gallery horeyba waxay u leedahay isbahaysi weyn adiga oo ku siinaya galka aaminka ah.
Instagram si xishood la'aan ah ayey uqortaa TikTok oo leh muuqaal Reels ah
Hawsha ugu dambeysa ee ay Instagram ka soo guurisay barnaamijyada kale waa suurtagalnimada in la abuuro fiidiyowyo muusiko 15-ilbiriqsi ah, sida TikTok na siiso
Sawirrada Google waxay midabayn doonaan sawirro hore oo madow iyo caddaan ah
Raadi wax badan oo ku saabsan muuqaalka cusub si aad u midabeyso sawirro duug ah oo madow iyo caddaan ah dhawaan oo lagu soo bandhigi doono Sawirada Google.
Sida sawiradaada loogu badalo shactiro
Video-post oo aan kugula talinayo oo aan ku barayo sida loo isticmaalo waxa aniga ii ah arjiga ugu fiican ee sawiradaada u rogaya majaajillo.
Ma rabtaa inaad ogaato sidaad noqon doonto markaad weynaato? App-ka ay dadka caanka ahi adeegsadaan !!
Fiidiyowga aan ku tusayo sida loo gaaro saameynta kuu oggolaan doonta inaad ogaato sidaad noqon doonto markii aad weynaato, dhammaantoodna leh barnaamij ku garaacaya shabakadaha bulshada.
Waa maxay iyo waxa aad ku samayn karto Google Lens
Soo ogow wax kasta oo aad sameyn karto, marka lagu daro ogaanshaha waxa loo yaqaan 'Google Lens', barnaamijkan aad ku isticmaali karto taleefankaaga Android mar walba.
Sawirrada Google waxay kubilaabaysaa cusbooneysiinta iyadoo lagu darayo qaab mugdi ah
Google wuxuu bilaabay inuu meel fog ka howlgaliyo suurtagalnimada adeegsiga habka mugdiga sidoo kale dalabka Sawirrada Google.
Gallery 3D qurux badan !!
Muuqaal sawir leh oo 3D ah oo aad ku faani karto ilaha garaafka ee aaladaha hadda jira ee Android ay leeyihiin.
Xusuusashada Android: Ma xasuusataa sawirkii hore ee Sawirka Android?
Muuqaal cusub oo fiidiyoow ah oo kujira qaybta Xusuusta Android ee aan dib u eegeyno kuna tusno sida loo rakibo sawirkii hore ee sawirrada Android.
Beddelka ugu fiican ee Quickpic. Waad jeclaan doontaa !!
Haddii aad ka heshay sawirada 'Quickpic gallery' ee aan maalin dhoweyd kuu keenay, waad jeclaan doontaa beddelkan Quickpic. Sawir Sawir fudud oo aad u shaqeynaya.
Sawirada Google waxay cusbooneysiisaa isku xirkeeda si ay uga shaqeyso taleefannada isku laaban
Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta loo sii daayay Sawirada Google, taas oo u oggolaanaysa iyada in si fiican loogu isticmaalo taleefannada isku laaban.
Soo dejiso oo rakib kamaradda Samsung Galaxy S10 ee ku taal terminaalkaaga Android. Android Jelly Bean ama ka sareeya
U soo dejiso kamaradda Samsung Galaxy S10 nooc kasta oo ah terminal-ka android-ka oo ku raaxayso mid ka mid ah kamaradaha ugu fiican ee aan abid arko.
Sida loo Download Download Cheetah Traceless QuickPic Mod APK
Casharka muuqaalka ah ee aan ku tusayo sida loo soo dejiyo barnaamijka 'QuickPic APK' ee la beddelay oo aan raad ku reebin moobiilka mobile-ka.
Khariidadda Sawirku waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku sahamiso Sawirradaada Google khariidad
Khariidadda Sawirku waa barnaamij cusub oo ka faa'iideysta yaraanta weyn ee Sawirada Google: ku soo bandhigidda dhammaan sawirradaada khariidad sida ay ku kala yaalliin.
Sida loo abuuro sawirro saameyn dhaqdhaqaaq leh
Fiidiyowga aan ku tusayo sida loo abuuro sawirro saameyn dhaqdhaqaaq leh qaab aad u fudud, madadaalo leh oo gebi ahaanba bilaash ah.
Barxad sawir qafiif ah oo shaqeynaya
Jumladaha leh ilaha yar ama haddii aad jeceshahay codsiyada fudud, adiga dartiis waxaan kuugu keenayaa sawir-gacmeedka iftiinka iyo shaqada leh.
Qualcomm waxay ku siin doontaa taageero 100 iyo ilaa 192 kamaradaha MP
Soo ogow horumarka ay Qualcomm ku soo bandhigeyso iyada oo la taageerayo kamaradaha illaa 192 MP, sida ay xaqiijisay shirkadda lafteeda.
Xalka: Kamaradda Huawei kaliya waxay duubtaa fiidiyowga HD, Smart Shot, Snapshot Degdeg ah iyo tabaha badan ee loogu talagalay Huawei
Waxaan idinkaga tagayaa talooyin xiiso leh iyo xalka dhibaatada aan awoodin inaad badasho tayada duubista ee codsiyada kamaradda Huawei.
Codsiga Razer Camera 2 wuxuu horeyba noo ogolaanayaa inaan ku duubno fiidiyowyada 60 fps
Barnaamijka Razer Phone 2 ayaa hada la cusbooneysiiyay iyadoo lagu daray astaamo aan laga heli karin inta badan taleefannada casriga ah ee suuqa yaalla.
OPPO waxay si rasmi ah u soo bandhigeysaa zoomkeeda indhaha 10x
Faahfaahin dheeraad ah ka hel tiknoolajiyada muuqaalka indhaha ee 10x ee OPPO horeyba ugu soo bandhigtay dhacdadii MWC 2019 ee ka dhacday Barcelona.
Ma ku qosleynaa?: Sida loo abuuro farriimo fiidiyoow qosol leh oo wejiyo aan macquul ahayn
Fiidiyoow aan waqti fiican ku haysto ka-fiirsasho codsi noo oggolaan doona inaan abuurno farriimo fiidiyoow oo bilaash ah
Adobe Photoshop Express ayaa noo oggolaan doonta inaan wax ka beddelno cabbirka astaamo-biyoodka waxayna ku dari doontaa miirayaal cusub
Cusboonaysiinta xigta ee Adobe Photoshop Express ayaa noo oggolaan doonta, sida cibaado-weynaha ugu weyn, in wax looga beddelo cabbirka astaamaha lagu garto ee aan ku darno.
Sida loo sawiro sawirada warqadahaaga
Casharro fiidiyow ah oo wax ku ool ah oo, si aad u fudud, hab fudud oo ku habboon nooc kasta oo ...
Sida loo daro saamaynta cilladaha ama u dalbo qaab sawir sawirrada laga qaaday Android-kaaga
Tababarka fiidiyowga ee aan ku sharraxayo sida loo dalbado qaabka sawirrada sawirrada lagu qaaday nooc kasta oo ka mid ah terminaalka Android. Natiijooyin cajiib ah !!
Qalabka fudud ee barnaamijyada loogu talagalay xiriirada, qoraalka qaadashada, daalaca feylka, sawir gacmeedka iyo sawir qaadista
Qeyb ka kooban 5 barnaamij oo furan oo furan oo laga helo 'Simple' oo kuu oggolaanaya inaad qortid, sawirto, sahamiso faylasha, maareyso xiriiradaada ama aad aragto sawirradaada lagaa qaaday.
WhatsApp wuxuu kudarsadaa sawiro qadka ah ogeysiisyada asalka ah ee Android Pie
Waxay ka imaaneysaa guddiga ogeysiiska halka sawirka uu dirayo mid ka mid ah xiriirada aad ku leedahay WhatsApp uu sii ballaadhi doono oo burburi doono.
Barnaamijyada ugu fiican ee sawir qaadista ee loogu talagalay Android
Shanta barnaamij ee ugu wanaagsan ee sawir qaadista loogu talagalay Android. Raadi wax badan oo ku saabsan barnaamijyadan oo aan ku soo dejisan karno Android.
Sida loo qariyo faylasha la soo dejiyey ee WhatsApp sawiradaada
Hadda waad ka qarin kartaa faylasha la soo dejiyey ama sawirrada taleefankaaga gaarka u ah gallery. Tani waxay kaa badbaadin doontaa dib u dhacyo lama filaan ah.
Sidee looga soo kabanayaa sawirrada ama faylasha WhatsApp ee aad ka tirtirtay qalabkaaga
Waxaan ku tusineynaa sida aad ugu soo kaban laheyd sawirada WhatsApp ee la tirtiray khiyaamo fudud oo hubaal ah in aan lagu ogaan doonin barnaamijka sheekaysiga.
Mid ka mid ah barnaamijyada sawirada sawirada ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android. FADLAN !!
WhatsApp horeyba wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qariso sawirada aad kahesho sawirka
WhatsApp waxay noo ogolaaneysaa inaan qarino sawirada aan ka helno sawirka. Raadi wax badan oo ku saabsan muuqaalka cusub ee horeyba ugu jira beta barnaamijka fariinta.
Sawiradaada muuqaalkaaga WhatsApp waxay kujiraan Facebook
WhatsApp waxay ku martigalin doontaa sawiradeena astaanta leh server-yada ay leedahay Facebook, ma waxay ku midoobeen Facebook inuu ku sii dhowaanayo kuna soo dhowaanayo
U dir sawirro WhatsApp adigoon tayada ka lumin
Ma ogtahay in marka aad sawirro ku direyso WhatsApp uu codsigu yareeyo tayadooda? Maanta waxaan sharxeynaa sida loo diro iyadoon qabashadaadu lumin faahfaahin
Codsi tafatiran sawir qaali ah
Waad ku mahadsan tahay Gastón Revol, xubin ka tirsan bulshada Androidsis, waxaan go'aansaday inaan isku dayo codsi farsameyn muuqaal qurux badan leh oo aad jeclaan doonto.
Barnaamijyada wadaagista sawir ee ugufiican sida barta Instagram
Haddii aad jeceshahay Instagram, maanta waxaan soo bandhigeynaa xulasho kale oo la mid ah oo aad sidoo kale ku wadaagi karto sawirro iyo in ka badan qaab ballaaran
Barnaamijyada ugufiican ee maaraynta sawirka ee Android
Waxaan kuu soo bandhigeynaa qaar ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu maareeyo oo lagu daawado sawirada ku jira Android, oo ay ku jiraan Google Photos, Slidebox iyo kuwa kale.
Abka Google ee loogu talagalay Android wuxuu bilaabayaa miirayaal midab ah oo raadinta sawir ah
Mashiinka raadinta Google ee loogu talagalay Android wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku sifeeysid sawirrada qaabkooda (GIF, farshaxanka farshaxanka) ama midabka mahadnaq cusub.
Barnaamijyada ugufiican ee lagusoo qaado sawirro dusha sare ah oo ku saabsan Android
Waxaan soo bandhigeynaa codsiyada ugufiican ee lagusoo qaado sawirro muuqaal ah oo ku saabsan Android, iyo sidoo kale 360-degree ama sawirro dhab ah oo muuqaal ah.
Google wuxuu hagaajiyaa sawir qaadashada habeenkii ee Android iyadoo la adeegsanayo codsi tijaabo ah
Abka Google ee tijaabada ah ee loogu talagalay Android wuxuu ujeedkiisu yahay inuu si muuqata u hagaajiyo sawir qaadashada habeenkii iyadoo la adeegsanayo farsamo toogasho dillaacsan.
Sida loo adeegsado Sawirrada Google kombiyuutarka ama aalad kasta oo la adeegsanayo biraawsarka Internetka
Tababar wax ku ool ah haddii loogu yeeri karo taas sababteedu tahay fudeydkeeda weyn, taas oo aan ku baran doonno sida loo isticmaalo Sawirrada Google ee kombuyuutarka.
Barnaamij sawir caan ah Meitu wuxuu u dirayaa cinwaanka MAC, IMEI iyo inbadan oo ah serverka fog
Abka caanka ah ee loo yaqaan 'Meitu photo app' wuxuu hada u diraa IME, cinwaanka MAC iyo in ka badan server-yada dibedda sida ay ku andacoodeen isticmaaleyaal kala duwan
Codsiyada ugufiican wax ka beddelka iyo dib u hagaajinta sawirrada
Soo ogow codsiyada ugufiican si aad wax uga beddesho oo aad dib ugu hagaajiso sawirrada moobilkaaga ama kiniinigaaga Android. Wali miyaadan isku dayin? Waa bilaash!
WhatsApp wuxuu horeyba u oggol yahay dirista illaa 30 sawir oo beta ah
Haddii aad tahay macmiil aad u jecel sawirrada oo aad diiradda saarto u dirista asxaabtaada iyo xiriiradaada WhatsApp, waxaad hadda u diri kartaa illaa 30 hal mar
[APK] Sida loo soo dejiyo loona rakibo Kamaradda Google. (Lama heli karo Dukaanka Play-ka)
Maanta waxaan ku baraynaa inaad soo dejiso oo aad ku rakibto kamaradda Google si toos ah abk maxaa yeelay lama heli karo si rasmi ah looga soo dejiyo Play Store.
4 barnaamijyo heer sare ah oo sawir loogu hagaajiyo Android
Haddii aad raadineyso barnaamij kale oo cusub oo loogu talagalay dib-u-hagaajinta sawir oo aad barato qaar ka mid ah kuwa quduussan, hubaal liistadan 4-ta ah ayaa ku habboon.
[APK] PhotoScan, barnaamijka cusub ee Google ee adeegsada sawir xisaabeed si loo sawiro sawirada
Photoscan waa codsi cusub oo lagu baarayo sawirada isticmaala sawir qaadista xisaabinta si loo helo natiijada ugu wanaagsan ee suurtogalka ah
Abka ugufiican ee saamaynta lagusoo dari karo sawiradaada waxaa lagu magacaabaa SKRWT wuxuuna hada ka socdaa Play Store
Maanta waxaan soo bandhigeynaa oo kugula talineynaa SKRWT oo inbadan oo kamid ah uu yahay barnaamijka ugufiican ee lagudaro saamaynta sawiradaada Android.
Polarr waa tifaftire sawir qaade ah oo xoogga saaraya miirayaasha
Haddii aad raadineyso beddelka Snapseed, VSCO ama Prisma, Polarr waa barnaamij ka xiiso badan farsamaynta sawirrada oo aadan seegi karin.
Lumiso! waa barnaamij diiwaan geliya cuntadaada adiga oo sawirro ka qaadaya cuntadaada
Waay! waa barnaamij kuu oggolaanaya inaad duubto dhammaan cuntooyinka maalinlaha ah adoo qaadanaya kamaradda taleefankaaga casriga ah isla markaana aad ka qaadayso shaashad mid walba oo ka mid ah.
Telegram waxaa lagu cusbooneysiiyaa tifaftire sawir cusub, abuurista GIFs iyo istiikarada la soo bandhigay
Telegram waa mid ka mid ah barnaamijyada lagu sheekeysto ee ugu fiican hadana waxay heshaa nooc cusub oo leh tifaftire cusub oo sawir leh, istiikarada la soo bandhigay iyo abuurista GIF
Storyo waa barnaamij si toos ah u sameeya fiidiyowyada sawirada ku jira taleefankaaga casriga ah
Storyo waa barnaamij loo isticmaalo in si toos ah loogu abuuro fiidiyowyo, in kasta oo ay iyaduna gacanta ku abuurto haddii adeegsaduhu sidaas doono.
Sawirada Google ayaa hada isku dubbaridaya sawirada la tirtiray qalabka aalada kale
Sawirrada Google ayaa lagu casriyeeyay muuqaal lagu maareeyo iskudhafka sawirada aad ka tirtirtay barnaamij kale oo gallery ah.
VSCO, mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee dib-u-hagaajinta sawir, ayaa cusbooneysiisa naqshadeeda
VSCO waa mid ka mid ah barnaamijyada ugufiican ee miirayaasha, dib-u-hagaajinta sawirrada iyo bulshada isticmaalaha ah ee aad la wadaagi karto sawirradaada.
Hadda Taabashada ayaa hadda ku aqoonsan kara sawirrada barnaamij kasta, oo ay ku jiraan barnaamijka kamaradda
Marka laga reebo sheekadan cusub ee Now On Tap, Google waxay kicisay xulashada qoraalka xitaa barnaamij kasta si loo helo natiijooyinka raadinta
Magic Cleaner waa barnaamij u ah WhatsApp tirtirida sawirada aadan dan ka lahayn oo lagaa tagayo
Magic Cleaner waa barnaamij loogu talagalay WhatsApp kaas oo mas'uul ka ah aqoonsashada sawirada qashinka aad haysato si si toos ah looga tirtiro.
5 barnaamij oo kamarado ah si aad u qurxiso wajigaaga isla markaana aad uhesho sawirka ugu fiican
Shan barnaamij oo kuu ogolaanaya inaad ku qurxiso wajigaaga sawirada iska qaadka ah ee aad ku qaadato taleefankaaga Android oo aad markaa ugu shubto shabakadaha bulshada.
Sawirada HD hadda ayaa lagu soo dhejin karaa barnaamijka Facebook ee loogu talagalay Android
Abka Facebook Android wuxuu horeyba u oggol yahay soo gelinta sawirada HD, in kastoo cusbooneysiintan ay tahay inay ka timaado dhanka serverka
Sida loo keydiyo sawiradaada WhatsApp ee Sawirada Google. Meel aan xadidnayn !!
Sida loo kaydiyo sawiradaada WhatsApp ee Sawirada Google adoo iswaafajinaya si toos ah iyo feejignaan la'aan dhammaan waxyaabaha kakooban,
Google wuxuu soo bandhigayaa toobiye barnaamijka kamaradda taleefankaaga si uu toos ugu aado Sawirada Google
Google waxay si aamusnaan leh u soo bandhigtay ikhtiyaar cusub oo lagu daro toobiye kujira barnaamijka kamaradda asalka ah si toos ah loogu boodo Sawirada Google
barnaamijka dib u hagaajinta sawir ee ugu wanaagsan ee Android waa bilaash
Maanta waxaan soo bandhigeynaa, kugula talinaynaa oo aan ku bari doonaa sida ugu fudud ee loo adeegsado waxa aniga aniga ah oo ah barnaamijka ugu fiican ee dib-u-hagaajinta sawir ee loogu talagalay Android.
Pool waa barnaamijka loo yaqaan 'Mediafire app' si loogu wadaago sawirada laga qaado xafladaha iyo dabaaldegyada
Pool waa barnaamij ay abuurtay Mediafire oo iskudaya inuu noqdo barta loo socdo dhammaan sawiradaas oo lagu qaado xaflad ama dabaaldeg.
Abka Google ee Snapseed wuxuu hadda ku tafatiri karaa sawirro qaab RAW ah
Snapseed waxay heshay cusbooneysiin weyn oo bixisa iyada oo ah qaabka kaliya ee ay u leedahay inay wax ka bedesho sawirada qaab RAW ah.
Qaar ka mid ah sawirrada xaday waxay muujinayaan Apple Music qaabkeeda loogu talagalay Android
Waxaan horeyba uheynay qaar kamida sawirada xaday ee Apple Music, oo ah hordhaca imaatinka hore ee adeegan muusigga ee la tartami doona kuwa kale.
Moobaylkaagu ma sudhan yahay markii uu sawir ka furanayo WhatsApp? Waxaan ku baraynaa sida loo xaliyo
Waxaan ku baraynaa sida loo xaliyo mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu caansan ee WhatsApp. Khiyaamadahan waxaad kaga hortagi doontaa moobilku inuu soo laalaado marka aad sawir ka furanayso barnaamijka.
Focus waa barnaamij galle ah oo ku saleysan sumadaha si sifiican loogu abaabulo dhamaan sawiradaada
Tilmaamaha sawirradu waa mid ka mid ah sifooyinka barnaamijkan loo yaqaan Focus waana mahadsanid iyaga oo aad u abaabuli kartid dhammaan sawirradaada qaab shaqsiyeed.
Instagram waxay tijaabisaa tifaftire sawir cusub si ay u fududaato wadaagistiisa
Xulleeyaha cusub ee sawirku waa tijaabada cusub ee 'Instagram' si loo fududeeyo in sawirrada lala wadaago shabakaddan bulsheed.
Sida loo demiyo keydka Google Photos xitaa marka barnaamijka la fogeeyay
Dejinta si loo joojiyo kaydinta Sawirada Google waxaa laga heli karaa goobaha Google halkii laga heli lahaa barnaamijka laftiisa.
Facebook wuxuu bilaabay barnaamijka 'Moments' si uu ula wadaago sawirada
Daqiiqadaha Facebook waa barnaamij gebi ahaanba madaxbannaan oo kuu oggolaanaya inaad sawiro si dhakhso leh oo fudud ula wadaagto dadka aad la xiriirto.
Liiska, barnaamijka Creative Commons si loo helo sawirro bilaash ah
Creative Commons waxay soo bandhigtay barnaamijka Liiska ee 'Android' si ay u raadiso sawirro bilaash ah iskuna kaashato abuurista bangi sawirro bilaash ah.
Abka cusub ee Sawirrada Google ee nagu sugaya agagaarka koone
Sawirrada Google waxay noqon doonaan barnaamij gebi ahaanba ka madax bannaan Google+ si loo maareeyo sawirrada aaladda
Muxuu noqon doonaa barnaamijka cusub ee dib-u-hagaajinta sawirka Adobe kaasoo beddeli doona Photoshop Touch
Adobe wuxuu rabaa inuu keeno isku dareen oo Photoshop ku bixiyo nooca desktop-ka aaladaha mobilada
Marka xigta waxaan sharxayaa sida loo rakibo arjiga gawaarida Motorola meel kasta oo ka mid ah qalabka Android iyo iyada oo aan loo baahnayn xidid.
Sida loo qariyo sawirrada iyo fiidiyowyada WhatsApp-ka ee 'Android'
Qari sawirada, fiidiyowyada iyo maqalka sawiradaada casriga ah, si aad uga fogaato waqti xun marka ay timaado inaad tusto sawiradaada
Lumific waa barnaamij gallery cusub oo lagu beddelayo Sawirada Google+
Lumific waa barnaamij ujeeddadiisa ugu weyni tahay in la beddelo Google+ Sawirada ku jira Android 5.0. Xiiso badan oo sifiican loogu daryeelay naqshadeynta barnaamijkan cusub
3 barnaamij oo ka soo kabsada sawirradii laga tirtiray Android-kaaga
Miyaad tahay musiibo markay timaado tirtirka sawirada? Maanta waxaan ku tusineynaa 3 barnaamij oo aad kaga soo ceshan karto sawirada laga tirtiray Android-kaaga, iskuna day inaad halkaas dib ugu soo celiso.
Quful barnaamijyadooda iyo sawirada Android leh Droid Protector
Waxaan ku baraynaa sida loo xannibo barnaamijyada loona kaydiyo sawirrada 'Android' ee leh 'Droid Protector application'
Ku soo dejiso beta-kii ugu dambeeyay ee WhatsApp oo leh tifaftire muuqaal dhammaystiran oo la dhisay
Halkan waxaad ku haysaa apk nooca beta-ka cusub ee WhatsApp oo leh tifaftiraha sawirka cusub ee la dhisay.
Fur kamarad, barnaamijka siiya deganaanshaha sawiradaada [4.0+]
Kaamirada furan waxay na siinaysaa waayo-aragnimo cusub oo ku saabsan sawir gacmeedka mobilada aaladaha leh Android 4. ama ka sareeya, maaddaama soo-saareheeda uu siiyay sirdoon macmal ah, marka waa inaan kaliya xoogga saarnaa muuqaalkeenna si aan u sawirno, inta soo hartayna waxaa sameeya barnaamijka.
Barnaamijka caanka ah ee dib-u-hagaajinta sawir-gacmeedka loo yaqaan 'Afterlight' wuxuu yimaadaa Android
Afterlight waa barnaamij xamaasad leh oo dib loogu hagaajiyo sawirka, in kasta oo aanu xor ahayn, haddana waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan uguna caansan ee macruufka
Ka weyn waa barnaamijka ugu fiican ee lagu daro qoraalka iyo sawirada sawiradaada
In ka badan wixii loogu talagalay Android ayaa soo degtay maalmihii la soo dhaafay si ay kuu siiso suurtogalnimada inaad ku shubto dhammaan hal-abuurkaaga
9 Barnaamijyada Tafatirka Sawirka Lacag La'aanta ah ee Hal Maalin Kaliya Amazon
Kaliya maanta waxaan awoodi doonnaa inaan kala soo baxno 9 codsiyo tafatir sawir oo bilaash ah Amazon
AVG Image Shrink & Share waa barnaamijka si loo yareeyo cabirka sawiradaada
AVG Image Shrink & Share waxay yareyneysaa cabirka sawiradaada, xitaa waxaad siineysaa suurtagalnimada inaad ku sameyso qaybo badan.
Dropbox wuxuu bilaabayaa Carousel, oo ah "barnaamij" galleeliyaal barnaamij loogu talagalay sawirrada iyo fiidiyowyada
Carousel wuxuu isku dayi doonaa inuu abaabulo dhammaan sawiradaada si loola wadaago asxaabtaada ama qoyskaaga
3 codsi oo la isku dayayo in lagu soo ceshado sawirro la tirtiray oo ku saabsan Android
Haddii qalad ah, ama MB la'aan awgeed aad uga takhalustay sawirrada moobilkaaga, maanta waxaan ka hadleynaa 3 barnaamij oo isku dayaya inaad ka soo kabato sawirro tirtiray Android.
Saddex tafatirayaal sawir oo aan caadi ahayn oo bilaash ah oo loogu talagalay Android
Maanta waxaan sii wadeynaa inaan ku tusino barnaamijyo aad uga faa'iideysaneyso qalabkaaga 'Android terminal', kiiskanna waxaan ku sharadeyneynaa 3 tifaftireyaal aan caadi ahayn
WhatsApp wuxuu kaliya ku tusi doonaa sawirka astaanta xiriiriyaasha ajandaheena
WhatsApp ayaa hada sameysay cusbooneysiin lagu hagaajinayo asturnaanta dadka isticmaala iyadoo laga hor istaagayo qof walba inuu arko sawirkiisa muuqaal.
SnapPea si toos ah ugula wada xiriir sawirradaada oo dhan kombuyuutarkaaga
Isku xir sawirrada aad ku haysato taleefankaaga Android kombuyuutarkaaga adoo adeegsanaya barnaamijka 'SnapPea'.
5ta Barnaamij ee ugu Sareeya Jecel Sawirka
Sawir qaadiddu waa adduunyo aad u ballaaran oo waxyaabo badani ay ku habboon yihiin: tafatirayaasha, miirayaasha, wax ka beddelayayaasha tayada leh ... Waxaas oo dhami waxay ku yaalliin Bakhaarka Play Store.
Kuwa nasiib darada ah ee aan aqoon codsigan waxaan si faahfaahsan ugu sharaxi doonaa sida ay u shaqeyso iyo waxa ay awood u leedahay ...